ဗဟုသုတအစုံ – Thutastar
လပြည့်ည ရောက်တိုင်း ရွတ်ဆိုရမည့် ငွေပြည့် ငွေလျှံ ချမ်းသာစေမယ့် ငွေဝင်ဂါထာ ငွေဝင်ဂါထာဟု ကျော်ကြားသော ဒိဝါတပတိဂါထာတော် သဗ္ဗမင်္ဂလာဂါထာပါဠိတော် (၁) ဒိဝါ တပတိ အာဒိစ္စော ၊ ရတ္တိမာ ဘာတိ စန္ဒိမာ။ သန္နဒ္ဓေါ ခတ္တိယော တပတိ ဈာယီ တပတိ ဗြဟ္မဏော။ အထ သဗ္ဗ မဟောရတ္တိံဗုဒ္ဓေါ တပတိ တေဇသာ။ (၂) တာဒိသံ တေဇသမ္ပန္နံ ၊ ဗုဒ္ဓံ ဝန္ဒာမိ အာဒရံ။ နမက္ကာရာ နုဘာဝေန ၊ သဗ္ဗေ ပူရေ န္တု သင်္ကပ္ပါ။ ဂါထာတော် မြန်မာပြန် အနက် (၁) နေမင်းသည် နေ့အခါ၌သာ တောက်ပ၏။ လမင်းသည် ညဉ့်အခါ၌သာ တောက်ပ၏။
အပြင်လောကနဲ့ အဆက်သွယ်မလုပ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာရွာကလေး
အပြင်လောကနဲ့ အဆက်သွယ်မလုပ်တဲ့ အင်ဒိုနီးရှားက ဗုဒ္ဓဘာသာရွာကလေး အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက လူဦးရေ ၂၀၀၀၀ ကျော်ရှိ ဘူဒီတောင်ပေါ်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။မြို့တော်ဂျာကာတာနဲ့ ၁၇၂ ကီလိုမီတာသာဝေးပါတယ်၊သူတိုနေထိုင်နေတဲ့ကျေးရွှာမှာ ခေတ်မှီပစ္စည်း အားလုံး လျှပ်စစ်-ဖုန်း-ကွန်ပြူတာ-စက် မှန်သမျှသုံးခွင့်မရှိပါဘူး၊ရှေးအစဉ်လာအတိုင်း မျိုးဆက်အလိုက်အမွေပေးပြီး ယခုအချိန်အထိ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းပြီးနေထိုင်နေကြပါတယ်။ ဘူဒီလူမျိုးတွေဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာကနေ့ဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နေထိုင်နေတဲ့ရွာတွေမှာ ကံငါးပါးကို အဓိက စောင့်ထိန်းကြပါတယ်။လူဦရေ ၂၆၁ သန်းကျော်ရှိတဲ့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာ ၈၂ ရာခိုင် နှုန်းဟာ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ သဘာဝရဲ့ အရှိအတိုင်း ပြောင်းလွဲဖြစ်စဉ်တွေကို နှစ်သက်ကြတဲ့ ဘူဒီကျေးရွာသားတွေ ပြင်ပ ယဉ်ကျေးမှုအစဉ်အလာတွေ ဝင်ရောက်လာရင် သူတို့ ရိုးရာပျောက်သွားမယ်ဆိုတာ ယုံကြည်ခဲ့လို ပြင်ပနဲ့ အဆက်အသွယ်ဖြတ်ပြီး နေထိုင်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Source:Saw Credit – hlataw ============= အပွငျလောကနဲ့
” လာခြင်း ကောင်းသူ ဖြစ်ပါစေ ” ( ၁ )
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသားကြီးဦးအောင်ဆန်းဦး ရဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ ကလောင်နံမည်( မေတ္တာဦး )အမည်နဲ့ခရီးသွားဆောင်းပါးရေးသူ ဒေါ်(လဲ့လဲ့နွယ်သိန်း)ဟာ စစ်အစိုးရအလိုကျ (KeyPlayer ) အဖြစ်နဲ့တကျော့ပြန်ဝင်လာလေသလား..ဆိုတဲ့အသိ သတိနဲ့ အမေစုကိုကြည်ညိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့ ပြည်သူလူထုကို အသိပေးသင့်တယ်ထင်လို့ပါ,ကျနော်ဒီစာကိုရေးဖို့အတန်ကြာကြာစဉ်းစားမိပါသေးတယ်။ အကြောင်းကတော့( အရမ်းအားနာမိနေလို့ပါ )ဗိုလ်ချုပ်မျက်နှာမိခင်ကြီးဒေါ်ခင်ကြည်နဲ့အမေစုမျက်နှာကိုထောက်ထားသောအားဖြင့်ပါ။သို့သော်လည်း မိမိအတ္တနဲ့ ကြီးပွားချမ်းသာဖို့အတွက်ရောင့်တက်အတင့်ရဲလွန်းလာသလို- အမေစုအစိုးရအတွက် အကျိုးမဖြစ်နိုင်တာသေချာသလို-အမေစုနဲ့အတူတိုင်းပြည်နဲ့နိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့ ဘဝတွေကို (ဘယ်သူသေသေ- ငတေမာရင်ပြီး)ရောဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လုပ်လာတော့မယ်လို့ယုံကြည်မိတဲ့အတွက်ဒီစာကိုအများပြည်သူအကျိုးအတွက်ရေးရပါလိမ့်မယ်။ စပြောရရင်တော့ ကျနော်တို့ကြည်ညိုရတဲ့လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီး- တပ်မတော်ဖခင်ကြီး- အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက စရပါလိမ့်မယ်။ဗိုလ်ချုပ်မှာ ရင်သွေးစုစုပေါင်း ( ၄ ) ဦးရှိတယ်ပေါ့ ,အကြီးဆုံးကသားကြီး ဦးအောင်ဆန်းဦးသားလတ်လေးက အောင်ဆန်းလင်း( ရေနစ်ကွယ်လွန် )တတိယကတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအသဲလေးအောင်ဆန်းစုကြည်( ယခု အမေစု ) ဖြစ်သလိုအမေစုအောက်က စတုတ္ထ သမီးလေးရှိပါသေးတယ်..ဒီစတုတ္ထသမီးလေးကတော့နံမည်တောင်မပေးရသေးခင်- ဗိုလ်ချုပ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ရာထူးလက်ခံရယူတဲ့နေ့မှာပဲတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်(၇) ရက်လည်သမီးအရွယ်မှာပဲ ဆုံးပါးသွားပါတယ်။အဲဒီသမီးလေး အသုဘ ချတာကို ဗိုလ်ချုပ်ခဗျာတိုင်းပြည်ရဲ့ အလွန်အရေးကြီးတဲ့အစည်းအဝေးတွေထိုင်နေရလို့မသိလိုက်ရပါဘူး
အရမ်းပျော်နေကြတဲ့ အသစ်စက်စက်လင်မယားနှစ်ယောက် ရဲ့ မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့တွေကြားထဲက ရင်နာစရာ လက်ဖွဲ့တစ်ခု
အရမ်းပျော်နေကြတဲ့ အသစ်စက်စက်လင်မယားနှစ်ယောက် ရဲ့ မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့တွေကြားထဲက ရင်နာစရာ လက်ဖွဲ့တစ်ခု “လက်မှတ်ပေးတာ ဘယ်သူလဲ” လက်ထပ်ပြီး နောက်နေ့မနက်မှာ အသစ်စက်စက်လင်မယားနှစ်ယောက်ဟာ မိဘတွေ လက်ဖွဲ့တဲ့ တစ်ထပ်တိုက်လေးထဲမှာ လက်ဖွဲ့တွေကို စစ်ဆေးကြည့်နေကြတယ်။ နှစ်ဖက်မိဘတွေဟာ အရမ်းချမ်းသာတဲ့ သူဌေးတွေ ဖြစ်ကြလို့ လက်ဖွဲ့တွေကလည်း အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ပိုက်ဆံတွေ များပါတယ်။ နောက်ဆုံးလက်ဖွဲ့အထုတ်ကို ဖေါက်လိုက်တယ်။ အထုတ်ထဲမှာ စာအိတ်ဖြူတစ်ခုကို တွေ့ရတယ်။ စာအိတ်ကို ဖေါက်ကြည့်လိုက်တော့ နောက်အပတ်မှာ လုပ်မယ့် နာမည်ကြီးအဆိုတော်တစ်ယောက်ရဲ့ Live Show ပွဲတစ်ခုရဲ့ ရှေ့ဆုံးတန်းက လက်မှတ်နှစ်စောင် ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီ Show ပွဲရဲ့ လက်မှတ်ခဟာ အရမ်းဈေးကြီးသလို လက်မှတ်ဝယ်လို့လည်း မရတော့ဘူး။ ဖျော်ဖြေမယ့် အဆိုတော်ဟာ သူတို့နှစ်ယောက်စလုံး အင်မတန်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အဆိုတော်ပါ။ သူတို့ နှစ်ယောက်ဟာ လက်မှတ်တွေကို
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း သိထားသင့်သော ဘုရားရှင် ဆံတော် ဘာကြောင့်အရှည်ထားရတာလဲ
ဘုရားရှင် ဆံတော် ဘာကြောင့်အရှည်ထားရတာလဲဒီမေးခွန်းကို စတင်မေးခဲ့သူက ဘာသာခြားတစ်ယောက်။ ကြက်သေသေပြီး ဆွံအခဲ့သူက ကျွန်တော်နဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ။ သူကမေးတယ်… “”ဘုရားရှင်က ချစ်သားရဟန်းတွေကျတော့ ဦးပြည်းခေါင်းတုံးနဲ့ ။သူကိုယ်တိုင်ကျတော့ ဆံတော်အရှည်နဲ့ကျတော့ သိပ်နည်းလမ်းမကျဘူးမဟုတ်လား။ စော်ကားချင်လို့ မေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကြိုပြီးတောင်းပန်တာပါ။ သိချင်လို့ ပါ။ တကယ်လို့တပည့်ရဟန်းတွေကို ဦးပြည်းခောင်းတုံးနဲ့ဆိုရင် သူလည်း ဦးပြည်းခေါင်းတုံးဖြစ်သင့်တယ်မဟုတ်လား။ ဒါမှနည်းလမ်းကျမှာပေါ့””….တဲ့။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်ပါလို့ရဲရဲကြီးကြွေးကြော်တဲ့ ကျွန်တော် အရှက်ရပြီ။ ကိုယ်လည်းတစ်ခါမှ ဒီလောက်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် မစဉ်းစားမိခဲ့။ မေးသူကမေး။ ဖြေရမယ့်လူတွေက ဆွံ့အ။ နောက်ဆုံးတော့ ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အတွက် မရေရာပဲ ဖြီးဖြန်းမဖြေချင်တဲ့အတွက် ရှက်ရှက်နဲ့ပဲ မသိဘူးလို့ဝန်ခံလိုက်ရပါတယ်။ သူပြန်သွားတော့ စ်ိတ်တိုတိုနဲ့ ဒီအဖြေကို မရရအောင် Web တွေမှာ မွှေနှောက်ရှာဖွေရင်း
#အယုံလွယ်တဲ့_မိန်းခလေးတွေ_ဖတ်သင့်တဲ့_ပုံပြင်…… #MustRead……. တစ်ခါက ကောင်မလေးတစ်ယောက် သူ့အဘွားအိမ် သွားဖို့ဆိုပြီး တောင်တက်လမ်းအတိုင်း လျှောက်လာနေတုန်း ရှောကနဲ အသံကြားတော့ ငုံ့ကြည့်လိုက်တယ်… ခြေထောက်နားမှာ မြွေတစ်ကောင်… မြွေက ခလောက်ဆွဲမြွေအမျိုးအစား အဲ့ဒီအချိန်မှာ ကောင်မလေးက ဘာမှမလုပ်ရသေးခင် မြွေက ကောင်မလေးကိုပြောပါတယ်… သူသေရတော့မယ် ထင်တယ်တဲ့.! သူအရမ်းလည်း ချမ်းနေတယ်တဲ့.! ဒီနေရာမှာ အရမ်းအေးတာပဲတဲ့.! အခုထိ ဘာမှလည်း မစားရသေးဘူးတဲ့.! ဖြစ်နိုင်ရင် သူ့ကို ကောင်မလေးရဲ့ အင်္ကျီထဲထည့်ပြီး ကောင်မလေးနဲ့ အတူ ခေါ်သွားပါလားတဲ့ လုပ်ရော…! ကောင်မလေးက ပြန်ပြောတယ်.! မဖြစ်ဘူး…မဖြစ်ဘူး… နင်ဘာမြွေလဲဆိုတာ ငါသိတယ်.! နင်က ခလောက်ဆွဲမြွေ… ငါ နင့်ကို ခေါ်သွားရင် နင် ငါ့ကိုကိုက်မှာ…နင်က အဆိပ်ပြင်းတယ်…! မြွေက ကောင်မလေးပြောတာကို လက်မခံဘူး မကိုက်ဘူး…မကိုက်ဘူး…စိတ်ချ..! နင်သာ
ဒီနေ့ဖတ်မိတဲ့ ယောက်ျားပိုင်းလုံးတွေအကြောင်း (အမျိုးသမီးများ သတိထားနိုင်ဖို့ ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ.သူတွေရဲ. ဖြစ်ရပ်မှန်တွေ မျှဝေထားတာပါ)
ကျွန်မက ပိုင်းလုံးတွေအကြောင်းရေးတော့ အမျိုးသမီးတချို့က ရယ်စရာလို သဘောထားပြီး ကွန်မန့်လာပေးကြတယ်။ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ယုံကြည်မှု အပြည့်ရှိတယ်ထင်ရင် ကျွန်မဝမ်းသာရမှာပါ ။ ဟိုးတလောက ဆရာဝန်မလေးတယောက် ဒူဘိုင်းက မြန်မာတယောက်နဲ့ ငြိပါတယ်။ ဟိုက ဘယ်လောက်အပြောကောင်းတယ်မသိဘူး။ ဆရာဝန်မလေးက အိုင်ဖုန်းတလုံးဝယ်ပေးလိုက်တယ်။ အပြင်မှာ မတွေ့ဖူးဘူးနော်။ ရသမျှ ချူနေရင်း ကြာတော့ မူမမှန်တာ သိလာတယ်။ နောက်တော့ဆရာဝန်မလေးက live လွှင့်ပြီး အကြောင်းစုံဖွင့်ချလို့ အဲဒီကောင်အကြောင်း ဗူးပေါ်သလ်ို ပေါ်လာမှ ဖုန်းဖိုးငွေတွေ ပြန်ပေးပါတယ်။ အဲဒီကောင်ဟာ ကျွန်မအကောင့်မှာပါ လာအက်ထားတာ တွေ့ရတယ်။ နောက်တခါ ညီမလေးတယောက် သူ့ ကိုယ်တွေ့ အဖြစ်အပျက်ကို ကျွန်မကို ဝန်ခံရင်း ရင်ဖွင့်ပါတယ်။ အဲဒီညီမလေးက ဖြူဖြူချောချောလေးပါ။ အသက်ကလည်း (၂၅) ကျော်ကျော်ပဲရှိတယ်။ သူက ဘန်ကောက်မှာမာစတာတက်နေရင်း
ယောကျာ်းတွေကိုစိတ်နာ ဒီနေရာကို အတွဲလာ ကွဲစေ ဆိုတဲ့ကျိန်စာ (သို့ မဟုတ်) မိန်းမရဲ တောင်တော် သခင်မ သမိုင်း
Comments Off on ယောကျာ်းတွေကိုစိတ်နာ ဒီနေရာကို အတွဲလာ ကွဲစေ ဆိုတဲ့ကျိန်စာ (သို့ မဟုတ်) မိန်းမရဲ တောင်တော် သခင်မ သမိုင်း
မိန်းမရဲတောင်ရဲ့အလှ အပကိုစိတ်ဝင်စားလို့သွားကြဘုရားဖူးကြFacebookမှာ ပုံတွေ ခဏခဏတွေ့နေရပေမယ့် အဲဒီတောင်ရဲ့ သမိုင်းကို သေချာရေရာအောင် သိတဲ့သူက ခပ်ရှားရှား . ကျနော်စပ်စု စုံစမ်း မေးမြန်းထားသလောက်က ဒီလိုဗျို့ . . နာမည်က နန်းဧကရီမွှေး ဘုရင့် သမီးတော် တစ်ပါးပေါ့ အချစ်ဆိုတာက ဆန်းကျယ်တယ်လေ သူချစ်မိတာက ကျေးတောသား ကုမ္မာရ တဲ့ သူတို့ နှစ်ဦး ချစ်ကြည်နူးနေတာကိုဘုရင့် ရွေနားတော်ပေါက်ကြား အမျက်ပွားစေခဲ့တာမဟုတ်လား မဲရိုးက ဟင်းအိုးကိုမှအားမနာ ကျေးတောသား ကုမ္မာရ လူငနွားကို သတ်စေတဲ့ တစ်ချက်လွှတ် အမိန့်ဒီသတင်း နန်းဧကရီမွှေးကြားတော့ ရင်ဝကို ဆယ်ပေါင်တူနဲ့ အထုခံရသလို ထင်ပါရဲ့ချစ်သူမောင်ကို